Tantaran’ny FPMA Toulouse – FPMA Toulouse
Ara-tantara dia tamin’ny taona 1897, fony Ranavalona fahatelo natao sesitany taty Frantsa, no nisian’ny fanompoam-pivavahana tamin’ny teny malagasy voalohany taty Andafy. Tao amin’ny Fiangonana ao Batignoles Paris no niangonan’ny mpanjaka niaraka tamin’ny mpivavaka niisa 30 teo ho eo.
Nanaraka izany dia nisy ny fanompoampivavahana nataon’ny miaramila malagasy naondrana hiady taty Andafy tamin’ny ady lehibe voalohany, tany anatin’ny sambo nitaterana azy ireo, avy eo dia tany amin’ny tanana sasany any amin’ny tapany avaratr’i Frantsa toa an’i Reims sy Paris.
Fa hatramin’ny andron’ireo miaramila malagasy nandray anjara tamin’ny ady lehibe faharoa, izay nijanona hipetraka teto Frantsa kosa, no nisian’ny fivoriana ara-dalanan’ny teratany malagasy hiara-mivavaka tamin’ny fiteniny. Ohatra voarakitra an-tantara tamin’izany ny tao St-Raphaël sy Strasbourg ary Montpellier
Araka ny fahatsiarovan’i Pasitera Jacques BERNARD, Mpitandrina tao amin’ny Eglise Réformée de Toulouse, izay niara-niasa akaiky tamin’ny FPMA Toulouse nandritra ny taona maro, dia nisy teto Toulouse koa izany fanompoam-pivavahana nataon’ny miaramila Malagasy taorian’ny ady lehibe faharoa izany.
Noho ny tsy nahitana vokatra azo ifikirana tamin’ny fikarohana samihafa natao anefa, na daty izany na toerana na anaran’olona, dia ny tantara iraisan’i Toulouse amin’ireo tanana lehibe vitsivitsy nampiantrano mpianatra malagasy fahizay ihany no afaka hambara eto.
Dingana iray lehibe nandrosoana tamin’ny fananganana ny Fiangonana FPMA ny nampijoroan’ny “Conférence Intermissionaire” tany Madagasikara ny Aumonerie protestante, hikarakara ny mpianatra malagasy taty Frantsa. Nanampy ny fiangonana tany Madagasikara tamin’ny famatsiana ara-bola io Aumonerie io, ny Fiangonana Frantsay sy ny Fédération Universelle des Etudiants Chrétiens (na FUEC) tany Genève. Anisan’ny andraikitra nosahanin’ny Mpitandrina Aumonier Daniel Ralibera, izay nanomboka ny asany tamin’ny taona 1956, ny nanetsiketsika ny mpianatra Malagasy tany amin’ny tanan-dehibe teto Frantsa, mba hamoronan’izy ireo fiaraha-mivavaka. Tao anatin’ireny ny teto Toulouse, izay niara-nanangana tamin’ny solontena avy amin’ny tanan-dehibe hafa, ny FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY ATY ANDAFY na FPMA, tamin’ny “Assemblée Constituante” tao Villemétry tamin’ny taona 1959. Ny Mpitandrina Victor RAKOTOARIMANANA, izay mbola mpianatra tamin’izany fotoana izany, no nitarika ny fivoriana. Teo no nitsanganan’ny FPMA Toulouse niaraka tamin’ny FPMA Paris, Strasbourg, Montpellier sy Marseille ho tafon’ny FPMA, izay neken’ny “Komity Protestanta” tany Madagasikara, tamin’ny taona 1960, ho Fiangonana miorina ara-dalana eto Frantsa.
Ireo daty nanamarika ny FPMA Toulouse
1959 : Assemblée constituante de Villemétry. Fiforonan’ny FPMA ka tafo dimy no nangana azy tany am-piandohana : Paris, Strasbourg, Montpellier, Marseille ary Toulouse.
1962 : Fanokanana Mpandray fanasan’ny Tompo voalohany . 8 mianadahy no notokanan’ny mpitandrina Aubert RABENORO tamin’izany rehefa avy nanaraka fampianarana tamin’ny teny frantsay nataon’ny Mpitandrina ny ERF Toulouse
1979 : Voaloham-bokatry ny fampianarana katekomena tamin’ny teny malagasy ka 7 mianadahy no notokanan’ny Mpitandrina ANDRIAMAHENINA tamin’izany
1982 : Niforona ny sampana « Sekoly Alahady » izay lasa « Sekolin’ny Tenin’Andriamanitra » taty aoriana. Nanampy ny fananganana ny FKMT (Fiangonana Katolika Malagasy eto Toulouse ) ny FPMA ka niara-nankalaza ny Noely ny fiangonana roa tonta
1984 : Niforona ny « Radio Antson’ny Filazantsara » izay radio an’ny FPMA Toulouse.
1986 : Nivoaka ny laharana voalohan’ny Gazety Fiainana, izay gazetin’ny FPMA Toulouse.
1989 : Niforona ny « Sampana Fifohazana » taorian’ny Fihaonambe voalohany nataon’ny Fifohazana FPMA tany Gardanne
1990 : Nozaraina anaty « faritany » ny mpiangon’ny FPMA Toulouse. Novaina anarana ho « Vala » izy ireo taty aoriana.
1993 : Nitsangana ny « Groupe KateAdo » izay fampianarana soratra masina sy katekomena ho an’ny tanora.
1997 : Niforona ny « Sampana Tanora Kristiana » sy ny « Sampana Vehivavy Kristiana »
1999 : Nandray ny « Choralie » na fihaonamben’ny antoko Mpihiran’ny FPMA ny Tafo Toulouse. Niova ho « ChoeurUni » ny fiantsoana azy io taty aoriana
2007 : Pasteur ANDRIAMIANDRA Elysée no voafidy ho mpitandrina matihanin’ny FPMA Toulouse. Ny taona 2000 izy no notokanana ho mpitandrin’ny FPMA tamin’ny fomba ofisialy ary talohan’izay dia « délégation pastorale » no nitandremany ny tafo
Nitsangana koa ny « Sampana Lehilahy Kristiana »
2009 : Nankalaza ny faha 50 taonany ny FPMA Toulouse
Niforona ny « Sampana Tily » ka « Capitole Toulouse » no anaran’ny fivondronana, Mpikambana feno ao amin’ny Eeudf sy ny « Tily eto Madagasikara »
Nanomboka nitondra ny anarana « Feon’ny Mazava » ny antoko mpihiran’ny FPMA Toulouse
2013 : Nandray ny Zaikabe Nasionaly FPMA ny Tafo Toulouse
2014 : Niforona ny « Vendredi des Jeunes », alim-bavaka karakarain’ny STK hanasany tanora maro.
2016 : 10 no isan’ny Vala itsinjarana ireo mpiangona.
2018 : Nandray ny XVè ChoeurUni teto Toulouse sy Montauban ny FPMA Toulouse.
2019 : Nankalaza ny faha 60 taonany ny FPMA Toulouse ka ny « Sampana Zava-maneno » no isan’ny Tsangambato nanamarihana izany.
Nanomboka nanao alim-pifohazana indray isam-bolana ary misokatra ho an’ny Fiangonana manontolo ny Sampana Fifohazana
2020 : Miroso amin’ny ezaka fananana trano fiangonana ny FPMA Toulouse.